China Capsule Bottle PET Red ifektri abakhiqizi | Qianduo Okufakiwe
Ikhwalithi esezingeni lebhodlela lepulasitiki. Yenza ukuhlaziywa kwekhwalithi yomkhiqizo kusuka kumazinga ekhwalithi yomkhiqizo womkhiqizi ukuthola ukuthi kuyinto efiselekayo yini. Amabhizinisi amabhodlela epulasitiki kumele enze amazinga ebhizinisi aphakeme kunamazinga kazwelonke, futhi nezindinganiso zemboni kufanele ziqine ngokwengeziwe;
1. Umklamo wenqubo yokubumba umjovo omile mpo awuqinisekisi kuphela ukungaguquguquki nokunemba kweshubhu lodonga ubukhulu nekhwalithi, kepha futhi kuqinisekisa ukumelana okuphezulu kwebhodlela, ukusebenza okuphezulu kokubekwa uphawu, ukusebenza ngokubukeka okuphezulu namandla anele ngokomzimba nangokomshini.
2. Kubandakanya ibhodlela elithengiswa kakhulu emhlabeni, yenza mfushane isikhathi sesimakethe sezidakamizwa.
I-3, ibhodlela lokupakisha le-capsule elikhethekile ekuqinisekisweni okwenziwe ngokwezifiso, ukuklanywa nokukhiqizwa kokupakisha ngokuhambisana necebo lakho lomkhiqizo.
4. Isakhiwo esikhethekile sokubekwa uphawu siqinisekisa ukuthi akukho ukuvuza.
Indlela Yokukhetha Amabhodlela E-PET
1.Ukufakwa uphawu kwebhodlela lekabhodlela Ukuqina komoya nokungena umswakama kudlala indima ebalulekile ekusimameni kokushaja;
2. Izinga lekhwalithi yebhodlela lepulasitiki. Yenza ukuhlaziywa kwekhwalithi yomkhiqizo kusuka kumazinga ekhwalithi yomkhiqizo womkhiqizi ukuthola ukuthi kuyinto efiselekayo yini. Amabhizinisi amabhodlela epulasitiki kumele enze amazinga ebhizinisi aphakeme kunamazinga kazwelonke, futhi nezindinganiso zemboni kufanele ziqine ngokwengeziwe;
3. Khetha izinto zokusetshenziswa eziyinhloko zamabhodlela epulasitiki nefomula yezithasiselo: izinga lomkhiqizo wamabhodlela epulasitiki aqinile liyasebenza ezintweni zokusetshenziswa eziyinhloko, futhi kufanele lihlangabezane nezidingo ezingezona ezinobuthi, ezingenaphunga, njll., Ngoba ziningi izinto zokusetshenziswa eziyinhloko, okudingeka zikhethwe njengokusebenza okuphelele kwezinto zokusetshenziswa. Amathebulethi ngokuvamile asebenzisa i-polyethylene ephakeme kakhulu, amabhodlela e-polypropylene, njengamabhodlela e-PET, angasetshenziswa ukudinga ukusebenza obala kanye nokusebenza okungcono kwezithiyo zamabhodlela wepeni, asetshenziswa ngokujwayelekile ekwakhiweni kwezidakamizwa eziwuketshezi ze-polypropylene noma i-polyethylene bottle ester njengezinto zokusetshenziswa eziyinhloko;
4. Ukuzinza nokuhambisana kwamabhodlela epulasitiki. Lapho usebenzisa amabhodlela epulasitiki, kufanele kwenziwe ukuhlolwa kwezidakamizwa esezingeni eliphakeme ukubheka ukuqina nokushaja kokuhambisana phakathi kwamabhodlela epulasitiki nezidakamizwa. Ukungena kokunye, ukuncibilika, ukukhangisa, ukusabela kwamakhemikhali kanye nokuhlukaniswa kwamabhodlela epulasitiki yezidakamizwa kunganqunywa ukutholwa kwesayensi;
5. Uhlelo lokuqinisekisa ikhwalithi.
Langaphambilini Ibhodlela le-Capsule PET Green
Olandelayo: Capsule Bottle PET okungabonakali